Tag: Doorashada | Sagal Radio Services
Guddiga doorashooyinka Qaranka oo shahaadooyin guddoonsiiyay 8 xisbi siyaasadeed
Guddiga madaxbanaan ee doorashooyinka ayaa munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho markii ugu horeysay Shahaado Aqoonsi ah ku guddoonsiiyay ilaa 8 Xisbi siyaasadeed.
Sagal Radio Services • News Report • February 8, 2017
4 musharrax ayaa usoo gudbay wareegga 2-aad ee doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta si habsami leh uga socota magaalada Muqdisho.
Caqabadaha sababi kara dib u dhac ku yimaada doorashada madaxweynaha Soomaaliya (Warbixin)
Kadib doorashadii guddoonka baarlamaanka Soomaaliya waxaa aad loo hadal hayaa doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo isbaheysiyada cusub ee ka socdo gudaha iyo dibada Soomaaliya.
Xuseen Carab Ciise oo dib loogu doortay Kursiga Xildhibaanimo ee beeshiisa
Doorashada Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Gobolada Waqooyi ayaa si habsami leh uga socota magaalada Muqdisho, iyadoo maanta la doortay Afar kursi.
Doorashada Madaxweynaha Xiriirka K/cagta ee FIFA oo maanta ka dhaceysa Zurich
Doorashada guud ee Madaxweynaha Xiriirka Kubadda cagta Adduunka ee FIFA ayaa maanta oo jimco ah ka dhaceysa magaalada Zurich ee dalka Switzerland.